जसपाको अध्यक्षमा किन अटाएनन् बाबुराम ? — Himali Sanchar
जसपाको अध्यक्षमा किन अटाएनन् बाबुराम ?
बाबुराम संघीय परिषद अध्यक्ष, महतो संसदीय दलको नेता !
२०७७ जेठ २५, आईतबार
काठमाडौं – राजपा र संघीय समाजवादी दलले दल दर्ताका लागि आइतबार निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा निवदन दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ।
दुई अध्यक्ष रहेको सो पार्टीमा तीन जना वरिष्ठ नेता छन्। जसमा पहिलो वरीयतामा अशोक राई छन् भने दोस्रोमा बाबुराम भट्टराई र तेस्रोमा राजेन्द्र महतो छन्। दल दर्ताका लागि भट्टराई समेत अध्यक्ष रहने गरी दल दर्ता गर्ने तयारी थियो।
तर, राजपाको कार्यालमा बसेको बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउँदा पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि गरिने निवेदनमा बाबुरामको नाम अध्यक्षमा अटाएन।
वरिष्ठ नेतामा पनि उनी राई पछिको बरियतामा छन्। उसो त राजपा र संघीय समाजवादी एकता भएर बन्‍ने दलमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवाद थिएन।
बरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबिच केही असहमति थिए। उपेन्द्र यादवलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाएर आफु र बाबुराम अध्यक्ष बन्‍नुपर्नेमा दाउमा थिए भने महतो ठाकुरलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानमा थिए।
बाबुरामको नाममा उनको पनि असहमित थिएन। तर, दल दर्ता गर्दा भने बाबुरामको नाम अध्यक्षमा अटाएन। समाजवादी जनता दलको ५३ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ।
दल दर्ता गर्नुअघि सो पार्टीभित्र लामै रस्साकस्सी चलेपनि अन्तत: दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। दल दर्ताका लागि तयार निवेदनमा ठाकुरपछि भट्टराईका नाम संघीय अध्यक्षका रूपमा लेखिएपनि पछि टिपेक्स लगाएर मेटिएको थियो।
स्रोतका अनुसार बाबुराम छिट्टै संघीय परिषद् अध्यक्ष र महतो संसदीय दलको नेता बन्ने भद्र सहमति भएको छ। सोही सहमति पछि आज दल दर्ता भएको हो।
“छिटै बाबुरामजी संघीय अध्यक्ष र महतो संसदीय दलको नेता बन्‍‍नुहुनेछ। भद्र सहमति नेताहरूबीचमा भएको छ”, समाजवादीका एक प्रभावशाली नेताले भने।
प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालय सुर्खेतमा भिडियो एक्सरे र ल्याव सेवा संञ्चालनमा आयो
बासु रोटरी भोकेशनल सुशासन अवार्डद्वारा शिवाकोटीसहित १४ जना पुरस्कृत
जन्मदिनको अवसरमा गरिने खर्चलाई समाज सेवा गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका युवा नेता
पहिरोकाले हरेक वर्ष जग्गा जमिन सधैंका लागि हराउदै
हुम्लाका सहायक प्रजिअ हमाललाई सोध्यो गृहले स्पष्टीकरण